पवनदीपलाई कोरोना सं'क्रमण: इन्डियन आइडलमा हल्लीखल्ली - Rising Dainik
पवनदीपलाई कोरोना सं’क्रमण: इन्डियन आइडलमा हल्लीखल्ली
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on पवनदीपलाई कोरोना सं’क्रमण: इन्डियन आइडलमा हल्लीखल्ली
एजेन्सी- इन्डियन आइडलको जारी सिजनका प्रतियोगी पवनदीप राजनलाई कोरोना भाइरसको सं’क्रमण भएको छ । पवनदीप राजन इन्डियन आइडलका निकै नै लोकप्रीय प्रतियोगी हुन् ।
भरतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पवनदीपलाई सं’क्रमण भएको जनाएका छन् । सं’क्रमित पवनदीप होटल क्वारेन्टाइनमा बसेको बताइएको छ ।
इन्डियन आइडलका होस्ट आदित्य नारायणलाई कोरोना भाइरसको सं’क्रमण भएपछि सबैको परीक्षण गर्दा पवनदीपमा सं’क्रमण पत्ता लागेको हो ।
पवनदीप सं’क्रमित भएपछि बाँकी प्रतियोगितामा त’नावको अवस्था बनेको छ । पवनदीप इन्डियन आइडल सिजन १२ को उपाधिका मुख्य दाबेदार हुन् । उनी गायन र वाद्यवादनसहित बहुमुखी प्रतिभाका कारण चर्चामा छन् ।
फेरि लकडाउन हुनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो खुलासा, दे’शैभर त’रंग
महन्थ ठाकुरको कदमले माओवादीमा रुवाबासी, संसदमै ठाकुरका अगाडि रो’ए माओवादी सांसद !
भागीरथीले पालेका बाख्रा हेर्दै भ’क्कानो छोड्दै रुन्छिन् आमा, भागीरथिका सबै सामान हटाए पनि आशु रोकिएन आमाको !
आँखाको उपचार गर्न अस्पताल पुगिन् रमेश पत्नी नन्दा, डाक्टरले दिए यस्तो सल्ला’ह (भिडियो हे’र्नुहोस)
क’मजोर मानिसले ब’दला लिन्छ, बलियो मानिसले माफी दिन्छ, बुद्धिमान मानिसले भुलिदिन्छ । – अल्बर्ट आइन्स्टाइन
February 15, 2021 Ramash Kunwar